Warar ciyaaraha kubbadda cagta Ingiriiska - BBC News Somali
Warar ciyaaraha kubbadda cagta Ingiriiska
12 Febraayo 2014
Image caption Tababaraha Liverpool Brendan Rodgers
Xalay waxaa dhacay ciyaaro xiisa badan. Waxaa ka mid ahayd mid dhexmartay kooxaha Man United iyo Cardif. Waxaa 2-0 ku badisay ManU oo goolasha ay u kala dhaliyeen Van Persie oo dhaawac ka soo laabtay 11 ciyaarood kaddib iyo Ashley Young oo gool la yaab leh dhaliyay.
Waxaa isaguna wacdaro dhigay laacibka Juan Mata oo ManU ay lacagtii ugu badneyd ee abid ay ciyaartoy ku soo iibsado ay kagala soo wareegtay Chelsea. Tababare David Moyes waxaa uu sheegay in guushaasi iyo kaalinta Mata uu ciyaarta ka qaatay ay niyadda u dhistay oo haatan uu jawigu isbeddelay.
Waxaa kaloo xalay badisay kooxda Liverpool oo 4-0 ku martay kooxda Everton. Waxaa isaguna ciyaar lala yaabay soo bandhigay laacibka Daniel sturridge oo labo gool dhaliyay rigoorana khasaariyay. Tababaraha Liverpool, Brendan Rodgers, waxaa uu sheegay inuu ciyaartoy kale soo qaadan doono kahor inta uusan dhicin waqtiga kama dambaysta ah oo ku beegan maalinta Jimcaha. Afaraad ayay hadda ku jiraan.
Waxaa xalay barbardhac gashay Arsenal oo la ciyaartay Southampton. 2-2 ayay isla dhaafi waayeen. Hase ahaatee weli Arsenal iyaga ayaa hoggaanka haya.
Caawa waxaa dhacaya afar ciyaarood oo tan ugu kulul ay dhexmarayso Tottenham iyo Man City iyo mid ay isaga hor imanayaan Chelsea iyo West Ham. Chelsea waxay hadda ku jirtaa kaalinta 3aad. Man City-na 2aad ayay joogtaa.